साना गाडीको सिन्डिकेट- यात्रु चर्को भाडाको मारमा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
माघ १७, २०७५ एलिसा श्रेष्ठ
भोजपुर — भोजपुर सदरमुकामदेखि ग्रामीण भेगमा चल्ने साना सवारीसाधनले मनोमानी ढंगले भाडादर असुलेपछि यात्रुहरू मारमा परेका छन् । कच्ची सडक र भौगोलिक दुरावस्था भएको भोजपुर–घोरेटार खण्डमा साना ट्याक्सी व्यवसायीले आफूखुसी भाडादरमा सवारी चलाउने गरेका छन् ।
०६७ सालमा ट्रयाक खोलिएको भोजपुर–घोरेटार सडकखण्डमा चल्ने साना गाडीले अन्य क्षेत्रमा चल्ने साना ट्याक्सीले भन्दा बढी भाडा लिने गरेका छन् । सदरमुकामबाट उत्तरी दिङ्ला जोड्ने ४२ किलोमिटर भोजपुर–दिङ्ला सडकखण्डमा ट्याक्सीले प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ भाडादर कायम गरेका छन् तर यहाँ सोही दूरीमा ८ सय लिने गरेका छन् । उही दूरीमा गाडी चले पनि आफ्नो घर पुग्नलाई भने महँगो भाडा तिरेरै कष्टकर यात्रा गर्नुपरेको घोरेटारका पर्शुराम ओझाले समस्या सुनाए ।
भोजपुरदेखि दिङ्ला, धरान, चखेवा छुट्ने ट्याक्सीले यात्रुलाई मार नपर्ने गरी प्रशासनिक रूपमै भाडादर कायम गरे पनि भोजपुर–घोरेटार चल्ने साना ट्याक्सी व्यवसायीले भने कम्पनीको संगठनमा आबद्ध नभई आफूखुसी भाडादर लगाउने गरेको ट्याम्के मैयुङ यातायात प्रालिका अध्यक्ष राजन राई बताउँछन् ।
करिब साढे ३ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै आफूहरूले यात्रुलाई मार नपर्ने गरी प्रशासनिक रूपमा भोजपुर–घोरेटारको भाडादर ५ सय कायम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष राईले सुनाए । ‘उनीहरू हाम्रो संगठनमा छैनन् । त्यही भएर समान दूरीमा समान भाडा बनाउनुपर्छ भने पनि उनीहरू मानेनन्,’ उनले भने, ‘संगठनमा आबद्ध नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति भइरहेका बेला पनि उनीहरूले भाडादर आफूखुसी कायम राखेका छन् ।’
अन्य समयभन्दा दसैं/तिहारमा अझै महँगो हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । त्यतिबेला प्रतिव्यक्ति हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भाडा असुल्ने गरेको स्थानीय मनोज खनाल सुनाउँछन् । खनालका अनुसार १२ जना यात्रु अट्ने ट्याक्सीमा २१ जनासम्म यात्रु कोच्ने गरिएको छ ।
गत वर्ष सुलभ र सहज यातायात सेवा प्रवाहका लागि बस सञ्चालन सुरु गरे पनि घोडेटारका
ट्याक्सी व्यवसायीले त्यसलाई चल्न दिएनन् । यता हतुवागढी गाउँपालिकाले कुनै त्यस्तो भाडादर कायम गर्ने प्रक्रिया नबढाइएको जनाएको छ । स्थानीय यात्रुको सहजताका लागि ट्याक्सी व्यवसायीले आपसमा समन्वय गरेर अहिलेका लागि ८ सयमा यात्रु बोकिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीहरू आफैंले भाडादर कायम गरेर एउटा ट्याक्सीले सातामा दुईपटक यात्रु ओहोरदोहोर गराउँछन् ।
जिल्लामा एउटै रुट पर्मिट नभएकाले पनि ग्रामीण भेगमा भाडादर कायम गर्न असहज भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरादेवी पौडेलले बताइन् । भोजपुर–लेगुवा ६६ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे भइरहेकाले दसैंअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग बसेको सर्वदलीय बैठकले त्यस क्षेत्रमा दैनिक चल्ने ठूला यात्रुबसलाई प्रतिव्यक्ति सय रुपैयाँ र साना ट्याक्सीलाई प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ भाडादर घटाएर भाडादर समायोजन गरेको थियो ।
यसबाहेक अन्य ग्रामीण भेगमा भने पहिलेकै भाडाको दररेट कायम गरेर साना यातायात चलिरहे पनि अहिलेसम्म तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुलेको गुनासो कहींकतैबाट नआएको प्रजिअ पौडेलले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गुनासा नआएकाले हामीले कुनै कदम चालेका छैनौं ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:५४
सुन्दर हुन सुशासन
माघ १७, २०७५ सम्पादकीय
काठमाडौँ — नेपाल सुन्दर छ भन्ने फलाकेर के गर्नु ? सुशासनको सूचकांकमा मुलुक दुई स्थान तल झरेको छ । गत वर्ष १ सय २२ थियो, यो वर्ष १ सय २४ औं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले गत वर्षझैं ३१ अंक पाउँदा अन्य मुलुकले आफूलाई सुधार गरे, हामीले सकेनौं ।
गत वर्ष १ सय ७६ वटा मुलुकमा सर्वेक्षण भएको थियो भने यसपटक १ सय ८० वटामा ।
यस्तो सूचकांक नागरिक र सेवाग्राहीले व्यक्त गर्ने अवधारणाका आधारमा तय गरिन्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायहरूले गर्ने सर्वेक्षणका क्रममा संकलन गरिने सूचनालाई विश्लेषण गरेर समग्र सूचक निकालिन्छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अफगानिस्तान र बंगलादेशभन्दा अघि छ । माल्दिभ्स र नेपालको समान स्थान छ । अस्थिर राजनीतिक अवस्था र सैनिक हस्तक्षेप भोगेको पाकिस्तान पनि नेपालभन्दा २ अंकले बढी पाएर ७ स्थान अघि छ ।
सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार, न्यायालय र सांसदहरूले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापार–व्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषय सर्वेक्षणका आधार हुन् । यीमध्ये नेपालको यस वर्ष स्थिति खस्किएको आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायका लागि दिनुपर्ने घूसका विषयवस्तुमा नेपाल गत वर्षभन्दा खस्किएको हो ।
पछिल्ला ६ वर्षमा नेपाल २७ देखि ३१ अंकभित्र सीमित छ । संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेका बखत सन् २०१३ मै नेपालले ३१ अंक पाएको थियो । १५ मा २७ झर्‍यो । गत वर्ष र अहिले फेरि ३१ । यसको अर्थ हो– हामी सुधारको दिशामा छैनौं ।
तीन वर्षयता राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि गणना हुन थालेको छ । त्यसमा नेपालको स्थिति नाजुक छ । यस क्षेत्रमा परार हामीले २१ अंक पाएका थियौं भने पोहोर र यसपालि २५ । हाम्रो सूचक अगाडि जान यसैले रोकेको छ । अरू क्षेत्रमा सुधार हुन नदिने बाधक पनि यही हो । मुहान सफा भए न धाराको टुटीबाट सङ्लो पानी बग्ने हो ।
प्रश्न छ, के हाम्रा सबै संयन्त्र भ्रष्ट छन् ? त्यसमा राजनीतिको हात छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भनेका छन् । उनको बोलीलाई कसैले पत्याएको छनक यो सूचकांकले देखाएन । न राजनीतिमा भ्रष्टाचार घटेको कसैलाई भान छ न कर्मचारीतन्त्रमा ।
सिंहदरबार पालिका–पालिकामा जाँदा सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्नुपथ्र्यो, सुशासन बढ्नुपथ्र्यो । त्यहीँ स्रोतको दोहन बढ्यो । सिंहदरबारको अधिकार मात्र पुगेन, भ्रष्टाचारको रोग पनि सर्‍यो । उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । उनीहरूका कामकारबाही कसैको प्रत्यक्ष अनुगमनमा छैन । राजनीतिक अधिकार त पाएका छैनन्, राजनीतिक संस्कार पनि सिक्न सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचारको जड चुनावी खर्च हो । राजनीतिमा लगानी भएको धनको अनुसन्धान भएकै छैन । बाहिर थुपारिएको कालो धन र स्वार्थसँगै भित्रिएको विदेशी लगानीको खोजबिन भएको छैन । अख्तियारको अधिकार ठूलो भए पनि संरचना सानो छ, क्षमता थोरै छ । लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि भ्रष्टाचार कम हुनै पर्छ । पैसा र पाखुराका भरमा चुनाव जित्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रदेश र संघमा खर्चको सीमा तोकिए पनि उम्मेदवारले गर्ने खर्च कसैले छानबिन गर्दैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पनि भ्रष्टाचार घटाउने गरी परिमार्जन गरिनुपर्छ । अपराधी र कालो धनवालाहरूको दलमा प्रवेशलाई बन्देज लगाइनुपर्छ । सुधारका लागि जनदबाब चाहिन्छ ।
सरकारले रहरले गर्दैन, कर गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन भ्रष्टाचार घटाउनै पर्छ । भ्रष्टाचार भाषणबाट होइन, आचरणबाट कम हुन्छ । शासन सही नभएसम्म देश
सुन्दर हुन सक्दैन ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:४७